Siyyaasni OPDO Ammaa, Summii Dammaan Makaa | QEERROO
Oromiyaa keessatti qabsoon Oromoo akka qabsaa’onni akeekaniin olitti adeemaa jiraachuun isaa karaa qabsaa’oota falma mirgaa gammachuun dhuunfateera. Qabsoon Oromoo isa dhumaaf fonqolcha garbummaarra jira. Murna Wayyaanee irrattis qabsoon adeemaa jiru dhabama isaanii akka ta’u argamaa jira. Har’a qabsoon Oromoo garboonfattoota dhaanquu ta’anii uummata keenya garbummaa jalatti ittisaa turan, dhodhoosee gidduu seeneera. Haabadan dhaanquu dhoote deebitee Hordaa hintaatu. Dhaanquu dhoote nii bobeeffatu. Yoo xiqoo kan fooyyee qabdu taate, naqaa Dallas taatee dabaree ishee ittifamtee jiraachuuf dirqamti. Har’a Wayyaanee akkasuma Garbummaan dhaanquu dhoote taate. Uummanni garbummaan ittifamaa ture garbummaa dhodhosee gidduu seeneera. Ishee dhumaaf haxaa’uu qofaatu hafa. Yaa ta’u gama diinaan waan jiru maalfakkaataa? Kan jedhuuf diinni qabsoon haalaan ta’uu baatu sochii itti jirutu jira. Sochiin qaama Bilisummaa Oromoo jibbuun godhamaa jiru hedduu gadi fagoof uummata keenya kan garbummaa jalatti deebisee gaadi’udha.
Icciitii diinaa saaxilanii wal hubachiisuun gala ga’iinsa qabsoof bu’uura. Xiyyeeffannoon barruu kanaaf icciita danqartoota qabsoo kana gad baasuun uummata ofii barsiifachuudha. Warri Bilisummaa Oromoo jibbu qabsaa’otaaf Oromoof naatoo jaalalaa hinqaban. Kanaaf yeroo kamuu qabsaa’ota balleessuuf dhabamsiisuu, qabsaa’ota qircatanii nyaachuun soorrata guyyuu isaaniiti. Garboonfattoonni buddeen qofaan utuu hintaane fooniif dhiiga qabsaa’otaan umurii dheereffatanii jiraatu. Kanaaf oggayyuu soorratni isaanii qabsaa’ota jajjaboodha. Kun kanaan utuu jiruu, amma gara ijootti seenuuf demnaa, gara akeeka danqartoota qabsoon Bilisummaa Oromootti yoo dhufne. Akeekni dura dhaabbattoota qabsoon Bilisummaa Oromoo kaleessa ABO jibbaa turan. Har’as sanuma.
Namni ABO jibbu Oromoo hinjaallatu. Namni ABO jibbu Bilisummaa Saba Oromoo hinfedhu. 1, Kaleessa OPDO’n kallattiin ABO baatee uummata gidduutti balaaleffataa turte. Kun immoo akka uummanni hojii isaanii baruuf daandii saaqee Oromoon OPDO balaaleffataa ture. Har’a OPDO’n hojii kaleessaa sana dhiifteetti? Jibba ABO irraa qabdu sanahoo? Kun matumaa ammayyuu akkuma sana ABO jibbiti. OPDO’n dhabama ABOf ganamaa galgala hojiitti jirti. Hoji manees walii laattee Irratti hojjetaa jirti. Ta’us sabboontonni miseensonni ABO fi deggartoonni isaa OPDO keessa jiran yaadaaf qalbiin, hojiin ABO duukaa jiru. OPDO’n haala siyyaasaa akkamii wal leenjiftee? 2, Siyyaasni OPDO ammaa jabaatadha. Hedduu fagoof dhokataadha. Siyyaasa OPDO ammaa fagoo dhaabatte arguun nii ulfaata. Siyyaasaa OPDO keessuma hulluuqxee galtee cerecertee baruu gaafateera. Siyyaasni qaama miidhu sana fakkaatee gaafa deemu balaa horate. Gaafa qaama miidhu sana fakkaachuuf uffata isaa uffatee, dubbii inni dubbatu dubbatee, bakka fedhii isaa dubbatee gaafa itti dhufe qaama miidhamaa sanaaf wayyoo! Har’a gochi OPDO kanuma. Cina qabnee akka jabaataniif, tumsas goonee bakki isaanii sanuma. Hojiin isaanii har’aaf kaleessaa akkuma huuruu Harree wal fakkaatti. OPDO’n har’aaf kaleessa waan ittiin wal caalan Siyyaasaani. Warri ammaa kun tooftaaf tarsiimoo ittin hojii isaanii galmaan gahatan beeku. Isheen kaleessa folodeedha, isheen har’a qiinqaniidha. Qiinqaniin suuta ura. Suuta nyaate dhabamsiisa. 3, ABO balleessuun alatti akka furmaata hinqabne ilmaan garboonfattootaa beeku.
Kanaaf waggaa Waggaan project’n ABO Irratti karaa diinaa Fi OPDO nii hojjetama. Akka ABO balleessuuf waan akeekkatametu jira. Kun akkamitti? ABO balleessuun nii danda’amaa? 4, ABO balleessuu dura sammuu uummatichaa keessaa akkasuma onnee sabaa keessaa ABO baasuutu hangafa. Kana Irratti Maal godhaa jiruree? Kana raawwachuuf bakka maraa jibbiinsaaf badii ABO kallattiin akka kaleessaa dubbachuun siyyaasa nu duraa rakasiisa jedhanii waan godhantu jira. Kana gochuuf bakka maratti alaabaa qabatee qaamni bahaa jiru qaama diinati jechuutu furmaata. Kanaaf hojiitti sename. Dubbii “basaasaa qabnee” ammaa “Alaabaa qabatee kan ba’e qaama diinati, basaasaa Wayyaaneeti” OPDO’tu akkana jechuu qabe. Haha. Kolfuu wayya. Kana hubachuuf Qeerroo OPDO Fi Wayyaaneen waliif maal turan? Har’ahoo walii isaaniitiif maali? OPDO’n qaama Wayyaaneti. Basaasaa Wayyaaneeti, kana kan hinbeekne jira taanan gowwaadha. Egaa basaasaan wal qabuu eegalee? Wal qabee immoo eessa wal geessaa? Inni qabe jedhus, yeroof inni qabameera jedhamu kunis Wayyaanee dhuma. Qaamonni qabamaa jiran basaasaa Wayyaanee erga ta’anii kan qabuun irra jiru wayyaaneedhaa? Kun soba furguggataadha. Kanaaf hiriira tasgabbeessuuf yaalii godhame keessaa tokko maqaa Basaasaati. Kan hundarra nama raajummoo basaasaa qabamu kun uffataaf aadaa isaa waan ibsu uffatee utuu deemuti. Utuu jennuu maqaa “Basaasaa” jettuun project karaa Wayyaanee bahaa tureen walshakkiin uummata gidduu akka bu’u godhamaa turuu isaa yaadadha. Kanaaf maqaa “basaasaa” jedhuun yeroo lamaaf Oromoo irratti hojjetaa akka jiran. Qeerroo hubadhaa, qaamni qabaman jedhaman qabsaa’ota
jechuuf miti. Waan deemamaa jirutu jira. Tapha OPDO’n taphataa jirtu jira. Tapha Daamaa, daamaa tapahattee beektaa? Daamaa utuu hintaphatin dura teessee itti yaadda. Qaama wal morkataa jirtu tokko nyaachiiftee lama dura nyaatta. Yoo jabaa taatemmoo kee keessaa tokko nyaachiftee kan isaa 6_5 nyaatta. OPDO’n daamaa uummata Oromoo Irratti taphataa jirti. Parsantaa 25% uummataa hojjettee, 75% Wayyaaneef Tigireef gumaachaa jirti. Amma dubbii basaastootaatti deebina. Basaastota qabaman jedhaman kana ija lamaan ilaaleera. 1, Caasaan qabame kun leenjii isaanumti kennaniin uummata ittiin qabbaneessanii qabsoon dhaabuuf Wayyaaneef OPDO’n kan leenjifatan dabballoota Wayyaaneeti 2, Ilmaan Oromoo haqaaf falmatan illee kana fuulduratti yoo qabaman “basaastota, alaabaa utuu baatee deemuu argine, kun basaasaadha waayee ABO dubbata” jedhanii qabuuf fuulduratti haala mijeesseeraaf. Argita xiqqoo bulee Qeerroo falmataa turantu qabama. Utuu jennuu, guyyaa dheengaddaa Magaalaa gurguddoo Oromiyaa keessaa bakka tokko keessan deeman ture. Magaalaa sana maqaa waaamuuf nageenya koof gaarii miti. Magaalaa kana keessatti, ilma Oromoo barnootni inni barate harkaa wal rukuttee,waan ittiin barateen uummata tajaajiluu dhabaaf kan rakkatee hojii guyyaan magaalattii keessa jiraataa ture jira. Dargaggoon kun ijoollee baadiyyaa magaalichaa jalatti dhalatan ta’uu qoradheera. Kanaaf eenyummeessaa magaalaa sanaa hinqabu. Wayyaaneen gochi dalagaa jirtu obsaaf teessisuu isa dhorkee of qabuu illee dadhabeera. Achii Hiriira nagaa barattoonni bahaa utuu jiranii arge. Achiis alaabaa bocatee mana dhokfatee qaba ture. Alaabaa kana qabatee bahe. Basaasaadha jedhame. Itti wacame, ragaan Alaabaa ABO tu harka jira. Dargaggooti ammuma qabanii harka waajjira poolisiitti geessan. “Ani waggaa 3 as keessa hojii guyyaan jiraachaan ture. Waggaa sadan magaala kana keessa jiraadhetti gadadoon ala humaa argaa hinturre” jechuun jiraataa ganda Baadiyyaa ta’uu utuu dubbatuu qabani. Kana eenyutu qabsiise, dargaggoota. Har’a Qeerroo bilchinni siyyaasaa nuti qabnu kan OPDO caaluu qaba. Waan adeemamaa jirutu, walii keenyaan wal gaadi’uudha. Waan adeemaa jirutu qaama qaaman miisisuudha. Kun hubatamuu qaba. Dubbiin Basaasaa qabne waci ammaa kun faffatoo summii qabuudha. Faffatoo summii qabu gaarii jettee nyaattee ittiin duuta. Buddeen Summ’ii qabuuf siyyaasni OPDO ammaa tokkuma. Buddeen summaa’e erga summaa’ee booda summ’ii qabaachuu isaa barta. OPDO har’aas itti dammaquu baannan, bullee kasaaraa keessa erga seennee boonya.
Kanaaf arge jettee sassattee nyaannaa summ’iin duuteetta. Argeef duukaa fiigda taanaan OPDO ammaa kanaan gaadi’mtee garboomteetta. Siyyaasni Oromoo akka summaa’uuf gocha godhamaa jiru keessaa kun tokko. Basaasaa Wayyaanee Oromiyaa mara keessa durumaa jiraataa ture. Durumaa nu faana nyaatee, nu faana dhugaa ture. Basaasaa Wayyaanee afaan keenya beekaa, nu faana dubbata. Maqaa OPDO tiin uummata keessa bittinfamee jira. Kan qabamaa jiru kunoo, isaanuma yoo ta’eyyuu akkuma tapha daamaa jenne sanaa Muraasa qabanii isinii qabne jechuun ittiin ABO dhabamsiisuuf deemu. Qeerroo hubadhu, WBO’n magaalaa Oromiyaa kam keessayyuu jira. Warri maqaa basaasaa qabuun hojii eegale kun, WBO’n akka eenyummeessaa malee magaalaa keessa guyyaa adeemaa oolee galgala hojii hojjetu shakkii qabdi. Kanaaf maqaa kanaan jara barbaadatu. Kana Irratti guyyoota muraasa dura, irreecha gara Buraayyuu malkaa Ateeteettin imalaa jiran ture. Ani jaala kiyya kan Rifeensa dheeraa qabu, magaala maddiin isaa qooree jira. Ilaalcha namaan nama gammoojjii keessa ture fakkaata. Dhugumaan WBO waliin tokkuma. Nutis gaafa waliin dubbannu “Jaalu maal qeerransoo nuuf fakkaatte” jennaan ture. Utuu deemnuu Karaatti sakkattaan nu dhaaban. Kan sakatta’u, polisa Oromiyaa ture. Akkuma konkolaataa keessaa buuneen jaala kiyya kophaatti baasani. Achiis waraqaa eenyummaa qabdaa? Jedhaniin. Eeyyee jedhee agarsiise. Achiis, “ati biyyuma turtee?” Eeyyee jedheen. Amma egaa eenyuun akka barbaadan hubanne. “Yaa gowwaa si duubaan bowwaa” jenneen. Utuu qabani Diina qabanneen akka Harree Halaakanii akka Saree dutanii wal kaasu jenne tilmaamne. Walii gala qaamni barbaadamaa jiru caasaa ABO ti. Caasaan ABO har’as kaleessas nii adamsama. Bira gahamuuf ulfaataadha. Qeerroo Bilisummaa kana argachuuf akkam akka gojomaa’an beekamaadha. Qeerroon kitila. Waan qabanii waliin gahan miti. Qeerroon walii isaayyuu bakka qabsoo irratti malee wal hinbeeku. Bakka Marii irrattis icciitaan mari’ta. Kanaaf bira gahuun yoo ulfaatu “qaamni sirba ABO faarsu dhaggeeffatuuf, qaamni alaabaa baatu basaasaadha” jedhanii wal nu funaansisuuf qophaa’e. Kana dura dhaabbachuudhaa qabna. Akeeka bososaa kanaan injifatamuu hinqabnu. OPDO amanuun gowwummaadha. OPDO’n buddeen summ’iin guutamtedha.
1 thought on “Siyyaasni OPDO Ammaa, Summii Dammaan Makaa”
Pingback: Summii Siyaasaa Dammaan Makaa -